Farmaajo oo Itoobiya u Adeegsaday Qorshe uu ku Dhabar Jabiyay Imaaraadka – KHAATUMO NEWS
Farmaajo oo Itoobiya u Adeegsaday Qorshe uu ku Dhabar Jabiyay Imaaraadka
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay Shabakada Khaatumonews u sheegay in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay burburinta Heshiiska Dekada Berbera ee Dp World, Somaliland iyo Itoobiya u adeegsatay Ra’iisul wasaare Abiy Axmed.
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in kulan hore u dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ay iskula meel dhigeen in Dowlada Itoobiya ay gabi ahaanba la wareegto Heshiiska Dekada DP EWorld isla markaana ay ka baxdo Soomaaliya maadaama Dowlada Federaalka aysan heshiiskaasui wax ka ogeyn oo DP Wolrd ay la saxiixatay Maamulka Somaliland.
Shirkadda Dp world ayaa qorsheyeysa in ay ka guurto dekadda Berbere ee Soomaaliland oo heshiis sadex geesood ah ay ku joogto waxaana sanadkii hore dalka sharci looga mamnuucay soo saaray Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, balse wali meelo dalka ka mid ah ayay ka howlgashaa sida dekadaha Boosaaso iyo Berbera.
Qorshaha ay shirkadda uga guureyso Bebera ayaan ka soo xiganay ilo ka agdhaw dhinacyada uu Heshiiska dekadahaasi u dhexeeyo ee Soomaaliland , Itoobiya iyo Shirkadda Dp world.
Previous Post: Deg Deg:Barlamaankii Puntland Oo Saaka La Dhaariyay.
Next Post: Al-Shabaab oo xukun adag ku fulisay nin la sheegay inuu kufsi geystay